WAR DEG DEG AH:- Doonyo Alshabaab hor leh oo hadda Garacad soo gaaray.
War hadda naga soo gaaray deegaan xeebeedka Garacad ee gobolka Mudug ayaa sheegaya in daqiiqado ka hor ay halkaas oo soo gaareen labo doonyood oo sida Ciidamo iyo hub hor leh oo kooxda Al-shabaab ka tirsan.
Guddoomiyaha deegaanka Garacad C/nuur C/laahi Xirsi oo ku sugan duleedka deegaankaas ayaa Warsidaha Puntlandone.com goordhawayd u xaqiijiyey inuu indhihiisa ugu jeedo doonyo hadda soo xirtay.
“Hadda waan u jeedaa doonyo soo istaagay, anigu malaagada bannaankeeda ayaan ku sugnahay, waxaaba la lee yahay niman amiirro ah baa la socda, meeshaan waalla haystaa” kuwaasi oo hadalladii uu khadka telefanka noogu sheegay guddoomiye C/nuur C/laahi Xirsi.
Xalay maqribkii ayay ahayd markii in ka badan 5 doonyood oo ay la socdaan ciidamo fara badan oo kooxda alshabaab ka tirsan ay dhinaca xeebta kasoo galeen deegaanka oo ay la wareegeen.
Dowladda Puntland oo goordhawayd arrintaan ka hadashay, ayaa wasiirkeeda ammaanku wuxuu duulaanka Alshabaab ee Puntland ku eedeeyay dowladda federaalka ah, isagoo la xiriiriyey diidmada Puntland ee nidaamka 4.5.